Nosazian’i Myanmar 7 taona am-ponja ireo mpanao gazetin’ny Reuters · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2018 16:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, русский, 繁體中文, Italiano, Ελληνικά, বাংলা, عربي, English
Iray amin'ireo sary marobe amin'ny “fanentanana antserasera” mitaky ny famotsorana ireo mpanao gazety voampanga tsy ara-drariny.
Taorian'ny fitsaràna naharitra sivy volana, nosaziana higadra 7 taona an-tranomaizina tamin'ny 3 Septambra ireo mpampita vaovao roa avy ao Myanmar izay nitatitra momba ny famonoana ny Rohingya ao amin'ny fanjakan'i Rakhine tamin'ny herintaona, noho ny fanitsakitsahana ny Lalàna Ofisialy momba ny Tsiambaratelo nivoaka tamin'ny taona 1923.
Wa Lone, 32 taona, sy Kyaw Soe Oo, 28 taona dia samy niasa tao amin'ny Reuters raha nosamborina tamin'ny Desambra 2017 noho ny fihazonana antontan-taratasim-panjakana momba ny hetsika miaramila tao amin'ny fanjakana Rakhine. Nandritra ny fotoam-pitsarana tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nanamarina ny polisy fa nahazo antontan-taratasy tany amin'ireo mpanao gazety tsy misy fanazavana izy ireo, fotoana fohy talohan'ny fisamborana.
Mpanao gazety roa no nanadihady ny famonoan'ny miaramila tao an-tanànan'i Din Din any avaratra andrefan'i Rakhine ireo mponina Rohingya 10 taorian'ny fifandonana teo amin'ny tafika sy ny Tafi-Panavotana Arakan Rohingya (ARSA) tamin'ny volana aogositra 2017. Niteraka fifindran-toerana any Bangladesh teo amin'ireo mpitsoa-ponenana Rohingya miisa 700.000 mahery ny fifandonana.
Tsy ankatoavin'ny governemantan'i Myanmar ho toy ny olom-pirenena na vondrona ara-poko any Myanmar ireo Rohingyas teraka tao Myanmar, izay Miozolomana ny ankamaroany. Tondroin'ny governemanta fa fikambanana mpampihorohoro ny ARSA.
Tamin'ny volana aprily 2018, nijoro vavolombelona tany amin'ny fitsarana ny kapitenin'ny polisy Moe Yan Naing fa nomena baiko hisambotra ireo mpanao gazety izy sy ny mpiara-miasa aminy iray. Voasazy herintaona an-tranomaizina izy taorian'io fijoroana vavolombelona io noho ny fanitsakitsahana ny Lalànan'ny Fitondran-tenan'ny Polisy. Nilaza tamin'ireo mpanao gazety izy taorian'ny fotoam-pitsarana izay nanameloka azy hoe: “Manakana ny polisy hafa hilaza ny marina ny fanagadrana ahy”.
Vantany re ny fanapahan-kevitry ny fitsarana, dia namoaka avy hatrany ny fanambaràny manameloka ny fanjakana noho ny tsy fahombiazany hiaro ny mpanao gazety ny Free of Expression Myanmar (FEM), vondrona fiarahamonim-pirenena iray ao an-toerana.
Mampiseho ny halavam-potoana izay hanafenan'ny Fanjakana Myanmar ny fahadisoany ny didim-pitsarana. Nampijaly sy nanagadra mpanao gazety teo an-toerana ny fanjakana taloha, saingy ankehitriny, dia naka ny iray amin'ireo trano fampahalalam-baovao malaza indrindra eran-tany izy. “
Tamin'io andro io, nanasonia taratasy fanambarana mitaky ny famotsorana ireo mpanao gazety roa tonta ny fikambanam-piarahamonina sivily dimampolo ao Myanmar.
Mitaky ny rariny ny feo ao an-toerana
Tsy niteraka hatezerana iraisam-pirenena ihany ny tranga fa tao anatin'i Myanmar ihany koa.
Olona maro ao amin'ny firenena no nanohitra ny fisamborana ireo mpanao gazety hatramin'ny taona lasa, anisan'izany ny fikambanana fiarahamonim-pirenena sy mpikatroka .
Tamin'ny volana lasa teo, namoaka lahatsary fanentanana tamin'ny haino aman-jery sosialy ny A-than (Feo), vondrona fiarahamonim-pirenena ao an-toerana miasa ho amin'ny fanafoanana ny lalàna momba ny fanalàm-baraka antserasera ao Myanmar, lahatsary izay ahitana mpikatroka marobe avy any Myanmar mitaky ny famotsorana ireo mpanao gazety. Toy izao ny vakin'ny fanambarana:
Nosamborina sy nogadraina ireo mpanao gazetin'ny Reuters Wa Lone sy Kyaw Soe Oo rehefa nanatontosa tatitra fanadihadiana momba ny vono olona tao amin'ny tanànan'i Inn Din izay nataon'ny [tafika] Ta-ma-taw. Neken'ny Ta-ma-taw ny vono-olona tao an-tanàna Inn Din ary miaramila manamboninahitra fito no efa voaheloky ny fitsarana misahana ny ady. Nanao ny asany araka ny etika i Wa Lone sy Kyaw Soe Oo hahazoana vaovao azo antoka ho an'ny olona. Efa nijoro vavolombelona ny kapiteny Moe Yan Naing fa nahankin'ny [kenda roroka] mpitandro filaminana ireo [mpanao gazety] noho ny vaovao notaterin'izy ireo.
Andro vitsivitsy mialoha ny fotoam-pitsarana 3 septambra, maro ireo nanao diabe tao an-tanànan'i Yangon, renivohitra ara-toekarena ao Myanmar, mba hitaky ny famotsorana ireo mpanao gazety.
Ho an'ny sasany, manamafy ny fahadisoam-panantenana amin'ny governemantan'ny Ligy Nasionaly ho an'ny Demaokrasia (NLD), tarihin'ilay nahazo ny loka nobel ho an'ny fandriampahalemana, Aung San Suu Kyi ny tranga. Naneho ny fahadisoam-panantenany tamin'i Aung San Suu Kyi ilay mpikatroka ho amin'ny fandriampahelamana Moe Thway, noho ny tsy fitenenany hiaro ny mpanao gazety.
Tsy avy amin'ny fitsarana ihany ny zava-misy fa nomena sazy am-ponja tsy ara-drariny i Wa Lone (sy Kyaw Soe Oo).
Tompon'andraikitra ihany koa amin'ny fanekena ny fisamborana azy ireo sy filazana ny maha-meloka azy ireo i Daw Aung San Suu Kyi sy ny governemantany
Nampiseho mazava tsara ny maha-mpanao didy jadona azy i Daw Aung San Suu Kyi.
Tamin'ny fanambarana iray manameloka ny didim-pitsarana, nokarakarain'ny A-than ary nosoniavin'ireo fikambanana tsy miankina 63 ao an-toerana, nanoratra ireo mpanohana hoe:
Mino izahay fa tsy mifanaraka amin'ny fomba fisainana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana sy ny raharaha hanenjehana ireo mpanao gazety roa…..amin'ny fanamarinana ny fisamborana sy ny fanagadrana azy ireo…..Raisinay ho famoretana ny zo hahazo vaovao sy fahalalahan'ny media izany, ary fihetsika manafay ny olona rehetra ao Myanmar izay maniry…… fiarahamonina tan-dalàna, tompon'andraikitra, anjakan'ny fahalalahana sy fahamarinana
Nomelohin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena ihany koa ny didim-pitsarana, anisan'izany ny fanambarana avy hatrany navoakan'ny Ambasady Amerikana ao Myanmar sy ny Vondrona Eoropeana ao Myanmar.